पोखरामा दिन दहाडै गो’ली हा’नेर भाग्ने ड’न प’क्राउ,कास्की प्रहरीको सफलता (भिडियोमा हेर्नुहोस) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पोखरामा दिन दहाडै गो’ली हा’नेर भाग्ने ड’न प’क्राउ,कास्की प्रहरीको सफलता (भिडियोमा हेर्नुहोस) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
दुई महिना अघि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १७ महतगौंडा (सितापाईला) मा भएको गो’लीका’ण्ड प्र’करणमा संलग्न फ’रार व्यक्तिलाई कास्की प’क्राउ गरि आज सार्बजनिक गरेको छ ।
आइतबार बिहान पोखरा १ सिम्पानीबाट एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले घ’टनामा संलग्न बारा बरियापुर वडा नं . ४ पिपराबृता घर भई पर्सा वीरगञ्ज आदर्श नगरमा अस्थायी बसोबास भएका ४५ वर्षीय राजकिशोर पाण्डेलाई प’क्राउ गरेको हो । पाण्डेलाई मेटलको काम गरिरहेकै अवस्थामा प’क्राउ गरिएको एसपी श्रेष्ठले बताए । पाण्डे पोखरामा मेटल लगायतको काम गर्दै आएका थिए ।
पोखराको महतगौंडामा गत माघ २३ गते साँझ ७ बजेको समयमा महतगौँडा नोलौ घुम्ती नजिक पवर्तका २७ वर्षीय मनोज बिकलाई अपरिचित व्यक्तिले गो’ली हानी घा’इते बनाएका थिए । आफू माथि गो’ली प्र’हार भयो भन्दै पर्वतको मोदी ८ चित्रे घर भई पोखरा २४ पामे बस्दै आएका मनोज चो’ट बोकेर बाइकमै बैदाम प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । उनको दाहिने कोखा (पेट)मा घाउको प्वाल थियो ।
प्रहरीले तत्कालै उहाँलाई उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज लगेकोमा अहिले स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको एसपी श्रेष्ठले बताए । बिकको दाहिने कोखामा अगाडिपट्टी प्वाल परी पछाडि ढाडको भागमा समेत चो’ट देखिएको थियो ।
सिटी स्क्यान रिपोर्टपछि गो’ली नलागेको नभई धारिलो हति’यार प्रहार भएको प्रहरीले डाक्टरलाई उदृत गर्दै बताएको थियो । अन्ततः गो’ली नै लागेको पुष्टि भएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प’क्राउ परेका पाण्डेको साथबाट ३ राउण्ड गो’ली, मोबाइल र पर्स पनि बरा’मद गरिएको छ । वायरिङको काम गर्ने बिक र मेटलको काम गर्ने पाण्डेबीच के कुरामा रिसईबी भयो भन्नेबारे प्रहरीले अहिल्यै खुलाएको छैन । पाण्डे अरु घ’टनामा पनि संलग्न भएको हुनसक्ने र उनले प्रयोग गरेको पे’स्तोल नभेटिएकाले पनि प्रहरीले थप विवरण सार्वजनिक गर्न मानेन ।
घा’इते विकले प्रहरीलाई दिएको हुलियाका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको र घ’टनामा संलग्नको पहिचान खुलेको प्रहरी उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 12, 2021 April 12, 2021 266 Viewed